Ntụle dị mkpirikpi nke GNOME 3.16 | Site na Linux
** GNOME ** bụ otu n'ime gburugburu desktọọpụ kachasị mma na GNU / Linux, ya mere otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nke ọkacha mmasị m, anaghị m akwụsị ikweta na o nwere ọtụtụ ezigbo ihe, kamakwa ihe ọjọọ na nke ahụ bụ ma ọ bụ obere isiokwu a.
Echiche ahụ abụghị ịkatọ GNOME. Anyị kwesịrị ịmalite n'echiche bụ na ihe ọ bụla m ga-ekwu na nke ọzọ bụ naanị echiche nke aka m na ihe masịrị m adịghị ka nke ndị ọzọ. Anyị ga-ahụ ihe ọma, na ihe ọjọọ, na-agba mbọ ịkpa oke ele mmadụ anya n'ihu.
M dokwuo anya ọzọ na ọ dị onye na-enweghị mgbe ọ bụla: Nke a bụ echiche m
Anwalewo m ** GNOME Shell ** ntakịrị ihe na ụbọchị ole na ole gara aga, enwere m ike ịmata ihe ọma na ihe ọjọọ ya, agbanyeghị, ọ naghị emezu ihe m tụrụ anya na m ga-ekwukwa banyere nke a n'isiokwu a.
Dị ka anyị si mara, ** GNOME 3.16 ** wee pụta ụnyaahụ juputa obi ndị Fans nke Desktọpụ Environment na olileanya na agụụ. Gịnịkwa na-akpata ọgba aghara niile? Ọfọn, na uche nke ọtụtụ, ndị na-eme ihe ugbu a nke ọma, opekata mpe ọtụtụ n'ime ha.
### Ihe ọjọ banyere GNOME 3.16.
M dokwuo anya, ọtụtụ n'ime ihe ndị m ga-ekwupụta banyere ihe ndị na-adịghị mma nwere ike idozi ma ọ bụ gbanwee site na ndọtị, agbanyeghị, aga m atụ aka na GNOME Shell dịka ndị mmepe ya tụpụtara ya, na ndabara na enweghị mgbakwunye.
#### Ihu windo
Adịghị m onye mmebe interface, mana ikwesighi ịbụ ọkachamara ka ị mata na ụmụ okorobịa nọ na GNOME gbalịrị ịbịaru OSX X nso. Ọ bụghị m, n'ihi na ọ bụ ezie na nke a ga-abụ isi okwu ọjọọ, n'aka nke ọzọ ọ bụ ihe m hụrụ n'anya.
Ihe m na-ekwu nwere ike bụrụ ihe megidere onwe m, yabụ m ga-agba mbọ ịkọwa onwe m nke ọma. Ọdịdị nke ngwa ahụ na Desktọpụ Environment n'ozuzu m na-amasị m, n'ihi na ọ dị ezigbo nso na ụdị nke OS X.
GNOME Ọ bụghị naanị gị na-achọ i *omi * ma ọ bụ * detuo * Apple * OS. Site na otu ihe omuma ihe omuma anyi nwere Unity, naanị ihe na-efu bu itinye Dock n'aka ekpe na ala, ihe na-ekesa ihe ngosi GNOME Shell, na n'okwu abuo na ndabara, ha apughi isi na ebe a .
Mana ọ dị mma, ọ bụrụ na ebumnuche bụ iweta ndị ọrụ GNU / Linux ihe na ụdị ** ọzọ, ha enweela ihe ịga nke ọma, agbanyeghị, iyingomi ụfọdụ nwere nsogbu ọ na-eweta. Dị ka anyị niile maara, GNOME ugbu a * na-ejikọ ogwe aha na windo windo na menu ngwaọrụ *, na ụdị OS X, n'ihe ha kpọrọ CSD. Ọ dị mma, ọghọm dị a thisaa ka nke a na-eweta?
Ọ bụ naanị ole na ole ka ị na-ahụ anya, mana ọ bụrụ na ngwa ahụ anwụọ, windo ahụ ga-anwụ, yabụ anyị anaghị achịkwa ya. Anyị enweghị ike imechi ya, belata ya, ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya. Na nke a na - anọchi anya nsogbu ịbụ ihe na - adịghị mma? O nwere ike ịbụ, m ga-asị, ebe ọ bụ na azịza nke a ga-adabere na ihe anyị na-eme n'oge windo kwụgidere .. * (Kpachara anya na ndị na-ahụ pr0n sneakily ehh) * ..
#### Usoro ohuru
Otu ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-enweghị mmasị na ya bụ na GNOME anaghị ekwe ka itinye ngwa ahụ n'akụkụ aka nri aka nri nke ihuenyo ahụ, ya bụ, na mpaghara nke panel ebe a na-eche na usoro sistemụ ga-aga, mana ha abatala na ụdị a 3.16 na ihe ngwọta: obere panel na ala aka ekpe * nke na-egosi na-awụli elu naanị mgbe enwere ngwa na-eji sistemu sistemụ, na anyị nwere ike zoo ma ọ bụ gosi.
Ruo mgbe echiche ahụ adịghị njọ, gịnị kpatara ị ga-eji jupụta akara ngosi n’elu panel. Agbanyeghị, enwere ihe ole na ole anaghị amasị m ma ọ bụ na achọtara m dị ka ọdịda:
Ọ bụ n'akụkụ aka ekpe dị ala, mgbe a na-emegharị anyị na sistemụ sistemụ dị n'akụkụ aka nri, ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ọ dị elu ma ọ bụ ala, mana n'aka nri. Nke a nwere ike iru ala maka ụfọdụ (gụnyere m).
Ọ bụrụ na anyị zoo ya na ngwa etinyere adabaghị na * usoro ngosi ọhụụ * anyị agaghị achọpụta ihe ọ bụla. Maka ụfọdụ ọ nwere ike ịdị mma, maka m ọ dị oke njọ, n'ihi na ngwa m na-eweta na * tray * bụ kpọmkwem ndị kwesịrị ịnọ iji gwa m ma nọrọ ebe a na-ahụ anya.
#### Anyị enweghị ụlọ ọrụ ọrụ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe windo ma ọ bụ hụ na anyị emeghewo, gịnị ka anyị kwesịrị ime? Site na ndabara, GNOME anaghị etinye bọtịnụ Maximize / Minimize na windo, ebe ndị mmepe ya nwere ike iche na anyị chọrọ imepe windo niile, otu n'okpuru ibe ya ma ọ bụ na desktọọpụ dị iche.
Agbanyeghị ịhụ ngwa ghere oghe anyị nwere nhọrọ 3 dịka m matara:
+ Soro cursor òké ahụ gaa elu akaekpe iji gosi dashboard *.
+ Mee otu ihe ahụ ma pịa igodo Ọmarịcha L (nke nwere ọkọlọtọ Windows).
+ Ma ọ bụ gbanwee n'etiti ngwa na-eji Alt + Tab.
Ọ bụrụ n ’ịchọta nke ọ bụla n’ime nhọrọ atọ ndị a bara uru ma ọ bụ na ọ dị mma, mana ọ dị m ka ọ enweghị nnweta ma ọ bụ nwee ike ịba uru ọ bụla.
#### Nkwupụta Silent
Otu n'ime ihe ndị rụzuru na ụdị a 3.16 bụ ọkwa ahụ na-aga ugbu a n'elu yana elekere. Aga m ekwu okwu banyere ndị a ma emesịa, ugbu a, m ga-ezo aka na ọkwa nke ụfọdụ omume na GNOME 3.14 rụrụ ọrụ ma ugbu a ha anaghị arụ ya.
Ihe atụ ha bụ mgbe anyị jikọtara ngwaọrụ dị na mpụga, dịka ọmụmaatụ ebe nchekwa USB. Kedu ihe bụ ihe ọjọọ, onwere onye chọpụtara na anyị emetụla ọdụ ụgbọ USB? MBA, oburu na anyi eleghi anya na obere akara ngosi di na nso elekere, anyi agaghi achota.
Ọbụna na mmasị notma Ọkwa Ana m ahụ nhọrọ nke na-enye m ohere ịgbakwunye ngwaọrụ ndị nwere ike iwepụ dị ka akụkụ nke ọkwa ahụ (gbaghara mgbapụta ahụ). Ma ugbua, ọ bụrụ na mmadụ nwere ụdị obi ọma, ị nwere ike ịgwa m otu m ga-esi wepu ngwaọrụ mwepu eweghara ozugbo imegheghị ** Nautilus **? Enweghị nhọrọ maka ya ebe ọ bụla.
#### Ngwa enweghị nhọrọ
Biko, onye obula n'ewetara okwu ochie na odighi mkpa ime ihe obula ma obugharia, detuo ihe nkiri, ma hazie akwukwo, na idi mfe nke GNOME na enye gi ohere ime nke a, puru idobe onwe gi nsogbu nke ide ihe na okwu gi. Ana m ekwu ya site na nkwanye ùgwù, na akụkọ ihe mere eme karịrị agadi.
[see okwu] Ọtụtụ na-akatọ KDE n'ihi na ọ nwere ọtụtụ nhọrọ, echekwara m nke ga-aka mma: ịnweta nhọrọ ndị anyị na-ejighị, mana nwee ha maka mgbe anyị chọrọ ha, ma ọ bụ enweghị ha, ma ọ bụ mgbe anyị chọrọ ha? [/ see okwu]
Nke ahụ bụ ihe na-eme m na GNOME na ngwa ya. Nautilus Onye ogbenye ahụ na-eme obere ụbọchị ọ bụla, n'oge na-adịghị anya ọ ga-enwe nhọrọ ole na ole karịa Eke y PCManFM, ma ọ bụrụ na ọ erubeghị ebe ahụ. Dịka ọmụmaatụ, gbalịa ịmegharị ọtụtụ faịlụ n'otu oge. Onweghi kwa ka m gha hu oke file n’agagh aga ihe omuma ya ma obu ahota ya, nani itinye otutu ihe omuma atu. Gedit Ọ bụ ihe ọzọ na ọ bụ naanị, ma hey, ezi a bit nke nwere agba pụta ìhè maka asụsụ dị iche iche.
Kalịnda ọfụma nke GNOME ọhụụ, nke dị ọcha karịa Maya kalenda nke Ndabere, ma ijikwa ihe omume anyị na - emegide ihe ọ dị (ọ ga - adị mfe), nwere ike isi ọwụwa. M na-akpọ gị òkù ka ị mee ule, mepụta ihe omume maka taa, ma otu ihe ahụ gbalịa ịgafe ya maka echi, naanị site na ịdọrọ ya. Ha enweghị ike, ha ga-emepụta nke ọhụrụ, tinye otu dị ka nke ochie ma hichapụ nke ochie.
Enwere m ike ịga n'ihu, mana ịkwụsị ngalaba a anyị nwere ** GNOME Control Center **, nke na-adịchaghị mfe na ụfọdụ, mana ịnweta ụfọdụ nhọrọ anyị ga-pịa karịa na Windows.
#### Anyị kwesiri ikwu maka nhọrọ omenaala?
Enweghị * Gnome Tweak Ngwaọrụ * nke nwere ike tinye ya na ndabara, anyị ga-enwe ọrụ siri ike na * DConf / Gconf-Editor * n'ihu ịgbanwe dịka ọmụmaatụ, sistemụ sistemu. Ọ bụ isi ihe m ga-akatọ na GNOME ọhụrụ.
#### nkọwa ndị ọzọ
Ngwa ma ọ bụ iwu launcher ( Alt + F2 ) enweghị akpaaka, yabụ na anyị ga-ama aha aha ngwa anyị chọrọ ịmalite.
### Ezigbo ihe banyere GNOME 3.16
Mana obughi ihe nile di njo, aghaghi ikwu ya. M na-ekwughachi na otu n'ime ihe ndị kachasị adọrọ mmasị banyere GNOME Shell 3.16 bụ interface ya na otu o si dị mfe. Na mkpokọta, ma na-ekwu okwu n'ozuzu, ọ bụ Gburugburu Ebe Obibi Igwe mara mma n'ime ihe ọ dabara ma tinye ụfọdụ ihe na-atọchaghị ụtọ.
#### Igbe ma ọ bụ GNOME igbe
Ngwụcha ihu maka Qemu-kvm nke okwesighi ka otuto. Ihe dị mma na-atụle na ọ dịbeghị onye ọ bụla chere echiche iji mejuputa ngwa ọrụ dị mfe maka ịmalite ọrụ tupu. N'ime ụdị a ọ dị mfe iji ma bụrụ ihe ọchị.
#### ema Ọkwa mmekọrịta
Ihe m na-enwekarị mmasị banyere GNOME Shell, ike dịka ọmụmaatụ iji zaghachi ozi nzuzo site na jabber site na ngosi ahụ n'onwe ya.
Notma Ọkwa ndị ọhụrụ adịghị njọ, mana enweghị ike ịhọrọ ndị anyị chọrọ ịhapụ ma ọ bụ mechie emee ka obi ghara iru m ala, ụfọdụ ọbụna na-apụ n'anya na-enweghị onye chọrọ, ma ọ bụ na ha nọgidesiri ike na enweghị ike iwepụ (ọkachasị na Mmasị, nke na-esote na-enwe chinchi), mana agbagharala gị. Ha dị ezigbo jụụ ma dịrị na ebe dị mma, na-ewere oghere nke a na-ejibu na mbụ.
#### Mkpọchi ihuenyo
Ma ọ bụ oyiri nke Windows ma ọ bụ na ọ bụghị, mkpọchi mkpọchi GDM mara mma, yana karịa karịa mgbe anyị nwere ọkwa ma anyị nwere ike ịhụ ha na-enweghị ịnweta desktọọpụ, n'agbanyeghị na akụkụ nke a nwere ike ịnọchite anya nnukwu nsogbu maka nzuzo nke ndị ọrụ.
#### Ihuenyo aka na aka
Nhọrọ ọzọ m hụrụ n'anya mgbe niile banyere GNOME Shell na-enwe ike ịdekọ desktọọpụ anyị site na igodo ndị dị mfe: Alt + Ctrl + Mgbanwe + R.
Enweghị ha, enwere m obi abụọ ọ bụla na onye ọ bụla nwere ike ịlanarị ihe karịrị otu izu na GNOME Shell, nke ọma, belụsọ ma ha anaghị achọsi ike. Naanị ọghọm bụ na ugbu a ọtụtụ n'ime ndị na-arụ ọrụ na GNOME 3.14 enweburu nkwarụ na GNOME 3.16. Ma n’enweghi obi abụọ ọ bụla, ha bụ ihe dị mma anyị ga-ekwupụta.
### Mkpebi na GNOME 3.16
Maka ndị hụrụ ịdị mfe na ịdị mfe n'anya, obi abụọ adịghị ya na ha ga-ahụ ezigbo Desktọpụ Gburugburu na GNOME. Ngwa dịka onye ahịa IRC ọhụrụ, eserese, kalenda, site na austerity ha maara mara mma, dị ọcha.
Enwere m mmasị n'ọtụtụ ngwa dịka ihu igwe, nke emechara nke ọma. Agbanyeghị, na njedebe nke ụbọchị, ị ga-achọpụta na ị nwere naanị ike ịrụ ọrụ ma ị nweghị ike ịpịpu Desktọpụ ahụ.
Enwere ndị ọzọ nke m na - enweghị ike ịnwale dị ka egwu, n'ihi na ha nyere m njehie mgbe m na - anwa ịmalite Python ma ọ bụ ihe yiri ya, na ọmịiko, enweghị m ike ịmepe windo nkata na enyi. Echere m na e nwekwara ụfọdụ ekwekọghị ekwekọ na usoro nke imewe (nke bụ n'ụzọ doro anya iji na mbadamba), n'ihi na mgbe anyị na-ahụ nnukwu bọtịnụ na windo, akwụkwọ mpịakọta mmanya dị warara.
Mana ikwu okwu n'ozuzu, na nhapụ ọ bụla GNOME na-elekwasị anya na ebumnuche ya ma na-enye ngwaahịa nke ọma. Na enweghị m mmasị na ya, na ahụghị m ya na-arụpụta, bụ naanị ekele m, amaara m na ọtụtụ ndị ọrụ nwere ahụ iru ala. Enwere ike ị nweta uru ndị ọzọ m na-ejibeghị ma ọ bụ na m amaghị, m ga-ahụ ha ụbọchị kwa ụbọchị, agbanyeghị m na-anụ ntụnye na njirisi na nkọwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ntụle dị mkpirikpi nke GNOME 3.16
Echiche ndị egosipụtara na blog a bụ naanị ọrụ nke onye na-ewepụta ha ma ọ bụchaghị na-anọchite anya echiche nke desdelimux.net
Echere m na ọ bụ ndị na-ese ihe nkiri na-ahapụ gnome na kọmputa na kọmputa
Ọ dị m ka ọ bụ ihe ziri ezi na gnome enweghị ogwe ọrụ, ọ bụ nnukwu vakano iburu ọnụ nke oke ma hụ windo m ozugbo.
Anyị nwekwara ike ime nke ahụ na KDE, dịka ọmụmaatụ, ma m ka nwere ogwe ọrụ 😉
Ihe m kwuru bụ na m hụrụ GNOME n'anya, agbalịrị m ụtọ niile nke mkpokoro ma ọ nweghị onye na-ewepụ ụtọ na mmasị nke ụdị ọrụ a.
O doro anya na ọ bụghị maka ndị anyị na-ejikwa ọtụtụ ederede ederede n'otu oge. Echere m na, omume nke GNOME na-atụ aro na-adịchaghị mma maka ijizi ọtụtụ akwụkwọ n'otu oge.
Ọ dị m ka onye na-aga mbara igwe na limbo na-achọ ụgbọ mmiri ya ma ọ bụrụ na ahụghị m ogwe ọrụ ahụ.
Gnome mara mma, enwere m mmasị na ya mgbe niile, mana echiche nke ịme ihe na obere obere oge ọ bụla, mgbe ụfọdụ ọ na-adị m ka nzuzu, enwere m olileanya na ọ gaghị akwụsị dị ka OperaCoast (na-agagharị dabere na mmegharị na igodo)
Obu na OSX Yosemite deputara TODOOOOOO si na Gnome ??? !!! ^ _ ^
O nwekwara ike ịbụ hehehe.
Zuru oke na windo ahụ bụ osx nke gnome ma ọ bụghị nke ọzọ, ma ọ bụrụ na ileghị ụbọchị ntọhapụ
Anaghị m ekwenye na ụfọdụ echiche dị ka onye ọrụ Gnome Shell mgbe niile, mana ha bụ ndị a na-akwanyere ùgwù. N'uche m, ekwenyere m na nkà ihe ọmụma nke desktọọpụ a bụ inye ihe dị mkpa ma dị mkpa iji nwee ike ịrụ ọrụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatị ya, ọ nwere ike ịdị mfe na ndọtị (nke enwere ike itinye ya ozugbo site na ibe dị mkpa).
Dị ka isi ihe, Kalinda bụ ngwa ọhụrụ dị na ule nyocha, ụdị nlele, a ga-ahapụ ya n'ụzọ doro anya na mbipute 3.18 nke Shell. Ha atụkwasịkwara ọzọ maka Akwụkwọ.
Ezigbo nyocha na ezigbo ederede, debe ya. 😉
Daalụ maka ikwu Chuck Daniels. N'ezie, ekwenyere m na ihe ị tụrụ aro, ma n'ezie, ị nwere ikike iji echiche nke aka gị. Ndị ọrụ ọ bụla dị iche, mkpa ha dịgasị iche iche. Ikekwe amụrụla m ụfọdụ ihe na GNOME anaghị enye m.
Ekwenyere m, ọ bụ ezie na echiche nke Workingrụ ọrụ ga-adị iche site n'otu gaa n'ọzọ. Dị ka ọkàiwu, ọ dị m mkpa ịnweta akwụkwọ n'otu oge ma na-agagharị na ya n'ụzọ dị mfe. Ọbụna usoro ịdị n'otu na-eme ka ahụ ghara iru m ala n'okwu ndị a. Ọbụna karị ma ọ bụrụ na m ga-aga Ihe omume ma ọ bụ jikọta igodo; ma ọ bụ ọ bụrụ na m kwesịrị iwetulata windo. N'ezie, nke a bụ echiche nke GNOME na-enye site na igbe ahụ.
Ihe gbasara ndọtị ahụ dị ezigbo mma mana ... enwerela nsogbu nke ekwekọghị nke ọba akwụkwọ na API?
Ee, mana ndị Gnome shei anaghị agbakọta ọtụtụ ihe nwere ọkọlọtọ ma enwere ndị ọzọ na ọ bụghị naanị na ha enweghị nhọrọ mana ha anaghị enwe nghọta, ihe ndị bụ isi dịka ịgbanwe akwụkwọ ahụaja ma ọ bụ ọdịdị. GNOME Tweak Ngwá Ọrụ bụ ngwa na-enweghị isi ebe ọ bụ na atụmatụ ya ga-enwerịrị ebe nchịkwa gnome. Ihe ozo bu na gnome control center di oke karie ihe ekwesiri. Na ọtụtụ ihe ndị ọzọ onye ọrụ anaghị achịkwa. Gnome shei na Fedora malitere site na megabytes 600 ruo 1gb nke ebule na igwe 4gig ma ọ nweghị ụzọ isi dozie nke a. Ọ bụ desktọọpụ nke dị na beta ruo ọtụtụ afọ ugbu a, ọbụnadị arụmọrụ gnome-nchekwa ma ọ bụ mmemme gnome ma ọ bụ ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ dị ka betas.
obere okwu dijo
Ị nwetara ya; Ndị mmepe Gnome na-ewetara gị ebe dị mkpa iji nwee ike ịgbatị ya yana ọrụ, nke na-eme ka ọ dịkwuo irè. Agbanyeghị na ha anaghị elekwasị anya n'inye ọnọdụ nhọrọ dị iche iche. N'ihi na mgbe ahụ ọ gaghịzi abụ minimalist. Mana nke ahụ anaghị ewepụ ohere ile anya mara mma na ọgbara ọhụrụ. Site na ndabara ọ na-atọ ụtọ n'anya ma nwee ike ịkwalite ya na isiokwu GTK na Shell dị iche iche, nke na-adịghị ole na ole.
Ikekwe omenala ahụ na-ekere òkè dị mkpa n'ịhọrọ ebe desktọọpụ. Ebe m nwere PC m na-eji Linux ma anaghị m eji Windows ma ọ bụ Mac ogologo oge.
Zaghachi obere okwu
A na-ekwukarị na iji ihe atụ na-akpọ asị. Ma nke a nwere ike ịbụ ihe atụ. Kde nwere ike ịba uru karị, mana ọ dị arọ na Gnome-Shell, dịkwuo ọkụ na ngwa ngwa. Site na ike ha na adịghị ike ha, tebụl abụọ ahụ dị irè, n'echiche m dị umeala n'obi.
I kwuola ya na mbido bụ echiche gị.
Achọghị m ka m tinye m atụnyere, mana na-ekwu ugbu a na KDE dị arọ karịa GNOME, ma ọ bụ nwayọ nwayọ, nwere ike ịbụ ịgha ụgha ka Sun. Ọ bụ ezie na n'ezie, anyị kwesịrị ịhụ ihe ị kpọrọ "arọ" n'okwu a.
Anaghị m ekwu na GNOME adịghị mma, ekwuru m (na okwu ndị ọzọ) na ọ naghị edozi m, na ọ bụghị otu. GNOME bụ nnukwu Desktọpụ Environment, mana ọ bụghị nke m.
Ekwuola m, KDE na Konqueror na 1.2 GB.
Gnome na ọkara Firefox.
Zaghachi na Spacejock
Dị ka Diazepan kwuru n'otu oge: "Ha abụọ dị oke arọ ma zuru oke."
Na KDE na Fedora amalitere m ihe dị ka 800mb na homerun launcher nke riri naanị ihe dị ka 250mb na n'otu distro mana site na gnome shell ma ọ bụ cinnamon desktọọpụ ga-amalite m ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ihe dịka 1200mb opekata mpe banyere 900mb na-enweghị ohere iji belata akụ nke gburugburu. Enwere m 4-core CPU na 1gb Nvidia ndịna-emeputa na 4 RAM, echeghị m na o kwesịrị ịrụ ọrụ ọjọọ na akụ ndị a na gnomeshell ma ọ bụ na Cinnamon.
nke mere na windo "Mee otu ihe ahụ mana ịpị igodo Super L (nke nwere ọkọlọtọ Windows) pụtara." Nke ahụ dị m mma, n'ihi na enwere m ihe niile yana igodo Win, yana ihe niile site na keyboard na achọghị m ịga ebe ọ bụla. After Key Win M na-ahụ windo m na oge, na ọ bụrụ na m chọrọ imeghe ihe m nnọọ pịnye ntakịrị na nke ahụ bụ ya… Na-amasị m nke ukwuu.
N'ezie, achọrọ m iwelata na wdg…. (nke m na-agbanwe na nhazi ngwaọrụ)
"I nweghi ike pinye desktọọpụ na ala" ... kedụ ihe ọ ga-abụ ịpịpu ala desktọọpụ ahụ? Ekele na ekele!
Gnome karia ma mara mma karie na desktọọpụ desktọọpụ ọdịnala nke a kara aka maka ihuenyo mmetụ nwere ụfọdụ ndọtị na-enyere aka mana anaghị eleghara ya anya.
M na-ahọrọ cinnamon ọ bụ ezie na ha abụọ dị na pc m .-.
o bu nke m jiri soro kde
Jide KDE ochie, ọ dịghị ihe ọzọ gbasara ... hahahaha
Cinnamon emechaala ọtụtụ oge na oge ikpeazụ, na-arụ ọrụ na desktọọpụ na-arụ ọrụ nke ọma, ọbụnadị karịa Gnome n'onwe ya, ọ bụ ezie n'izu ole na ole gara aga m wụnye Mint na nwa nwanne nna ya na eziokwu ahụ bụ na achọpụtara m na "ọ dị arọ" ... N'ikpeazụ, ọ kwụsịrị KDE, o doro anya na ọ bụ O nwere ekele nke ukwuu na-abịa site na Windows ... ọ jọgburu onwe ya na mgbe ụbọchị 5 gachara desktọpụ site na ọtụtụ ọrụ aka ọ tinye n'ime ya, na-ekwughị agba ndị ọ họọrọ iji hazie: facepalm: maka ụtọ, agba.
gnome ma ọ bụ kde…. iwu na-emeghe oghere ches
M na-ahọrọkarị wm, ọ bụghị n'ihi na pc m bụ violet ma ọ bụ na ọ bụghị ezigbo ike, enwere m ike ịgba ọsọ kde n'enweghị nsogbu mana enwere m mmasị na ịdị mfe, enwere m menu iji mepee ngwa, oge, tray system, yana taskbar m zuru ezu. , otu osila dị, ọ bụrụ na achọrọ m desktọọpụ m ga-aga xfce
Maka m ọtụtụ hipster na minimalist bụ kọmpụta nwere kaadị ebutere ụzọ ...
Ndị ahụ na-eji Gnome, KDE, WM, bụ sooooo isi ...
Naanị ịgụ isiokwu ahụ ga-ahapụ m echiche na-atụ ụjọ na m nwere ike ịnwe otu ụbọchị iji nwaa anụ ọhịa dị ka nke a. Mgbe m chọrọ ịhụ ihe mara mma karịa ịmalite Debian, amalitere m ịmalite Windows Vista ya na Aero na chirimbolos niile, echekwara m echiche a. Ma ọ bụrụ na m chọrọ ime ihe ọ bụla ọzọ, mgbe ahụ Debian na Mate Desktop. Mgbanwe maka mgbanwe ahụ n’onwe ya, n’enweghị ebumnobi doro anya, n’enweghị mkpa ọ bụla, n’enweghị edozi nsogbu ọ bụla na kama iweta isi ọwụwa dị iche iche, gịnị kpatara ya ... Ọ bụrụ na njikwa dị n’aka nri, kedụ ihe a ga-enye site na ịgbanwe ha n’akụkụ nke ọzọ? Gịnị mere ị ga-eji hapụ ihe bara uru? Were ihe atụ nke Windows 8 na Metro ya ma ọ bụ ihu ọhụụ ... ọ bụghị ewu ewu, ọ baghị uru maka ịrụ ọrụ n'ọfịs ha kwesịrị ịlaghachi na mbido menu nke ndụ. Mgbe ahụ, m ga-aga n'ihu na Debian m na Desktọpụ Mate, otu ihe ahụ dị na ihu mana ọ ka mma karịa Gnome ochie. Ihe niile na-aga ebe o kwesịrị ịga, ihe niile na-arụ ọrụ, enwere ike ịrụ ọrụ ya. "Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, edozila ya"
Hahaha mba, mpio windo dị n’aka nri ka ọ dị na mbụ. Echere m na elav gbanwere ha n'aka ekpe n'ihi ihe ụfọdụ.
Ekwenyere m na gị n'ihe niile. A naghị agbagha agbagha na ọ bụ desktọọpụ mara mma nke ukwuu na ụfọdụ ngwa na-adọrọ mmasị, dị ka ihu igwe na maapụ, mana ọ naghị arụ ọrụ nke ọma. Enweghị ihe ọ bụla dị mma ka m kwuo. Kedu ihe kpatara ha ji esi ọnwụ na-eme ka onye ọrụ jiri usoro ahụ dịka ha chere na ọ ga-arụ ọrụ? Ihe ọ bụla DE ọ bụla na-enye anyị ohere ịmegharị ya na mmasị na mkpa anyị. N'okwu m, KDE m dị iche na otu esi abịa site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'ihi na m na-emegharị ya maka mkpa m.
“GNOME bụ otu n’ime gburugburu desktọọpụ kachasị mma na GNU / Linux, ya mere otu n’ime ebe ndị ama ama. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nke m ọkacha mmasị »anyị malitere post merụsịrị, Gnome abụghị otu nke kasị mma, nanị otu n'ime ndị kasị ewu ewu. Okpokoro kachasị mma bụ nke onye ọ bụla na-ahọrọ, nke ahụ na-ewu ewu abụghị nke ka mma.
Ọ bụrụ na ọ ka mma ma ọ bụ bụrụ ihe a ma ama karịa akụkụ nke ekele nke onye ọ bụla, ọ bụghị n'ihi nke ahụ post ahụ malitere n'ụzọ dị njọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ bụ maka m otu n'ime Best, n'eziokwu, maka m enwere naanị BEST, KDE na GNOME, ndị ọzọ na-eji ngwa sitere na abụọ a.
Ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ nke Gnome Shell Client Side Decorations rutere otu afọ tupu OSX's CDEs. Yabụ na ọ bụ OSX nke Gnome Shell kpaliri, ọ bụghị nke ọzọ. Chọpụta ntakịrị mma ...
Zaghachi na developer.js
Que? Eleghi anya okwu CDE buru ụzọ na GNOME, mana na OS X ọ dị obere, mana ogologo oge gara aga, ogwe aha ahụ yana mwekota nke ogwe ngwaọrụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nwere isi mmalite nke ị nwere ike iji rụọ ụka gị karịa, biko ezipụla ha.
Amaghị m ma ọ bara uru:
Enwere njikọ dị na otu edemede site na 2011 nke a hụrụ na agbanweela mgbanwe a kemgbe afọ ahụ.
Anọ m na-achọ ma o doro anya na enwere m ekele maka njirimara a na OS X Yosemite, ụdị nke OS a bụ Mavericks na dịka m nwere ike ịhụ ebe ahụ etinyebeghị ha. Dị ka OS X wee pụta na 2014, ma ọ bụ? Gnnome Shell 3.10 wee pụta na 2013, na webata CSD ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ, Gnome bịara na mbụ ya na OS X jiri ya emechaa. O doro anya na m na-ele anya maka ụbọchị blog na ihe oyiyi iji kwuo nke a, amachaghị m akụkọ ihe mere eme nke abụọ ndị a. Enwere m ike na m hiere ụzọ, ọ bụrụ otú ahụ, gbazie m.
Site n'ụzọ elav, ọ bụ CSD abụghị CDE (Client Side Decorations dika developer.js)
Ka anyị hụ, ha nwere ike depụtaghachi atụmatụ Epiphany dị ka ihe MuyLinux si kwuo, ma eleghị anya ọ bụghị, agbanyeghị, inwe bọtịnụ Close / Minimize / Maximize n'ogo nke toolbar bụ ihe na ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ nọrọ ogologo oge na OS X (ọ bụ ezie na ọ bụghị ngwa niile). Ka o sina dị, ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na GNOME webatara ya na 2011, ọ bịara iji mejuputa ya na 2014 / 2015. yabụ nke mbụ kụrụ, gbarie ugboro abụọ .. 😀
M ama idozi CSD, M mgbe niile na-ezighị ezi na-etinye CDE, nke m nwetara site ebe a, ya mere mgbagwoju anya.
Onye ọka iwu ekwensu dijo
Echere m na echiche nke na-eme ka tebụl a dị mgbagwoju anya. KDE ga-enwe ọtụtụ nhọrọ, mana gịnị kpatara anyị ji chọọ ka ha niile arụnyere ma weghara ohere diski, yana ụlọ akwụkwọ ọ bụla metụtara ha, ma ọ bụrụ na anyị ga-eji 20% n'ime ha?
Gnome dị obere ntakịrị, ka anyị wee hapụ ọtụtụ ụlọ ọrụ. Mana nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ndọtị ahụ bụ, iji dozie desktọọpụ ka anyị jiri ya.
Ọ dị m ka ụzọ GNOME na-eme ka m nwekwuo nghọta, naanị ihe na - eme bụ na e mere ya ihe ọjọọ, n'ihi na ụdị ọhụụ ọ bụla agba ochie anaghịzi arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na-edozi nsogbu ndakọrịta a, ị nwere ike ịwụnye ihe ọ bụla bara uru maka otu ị si arụ ọrụ, nke na-ebute ịnwe ọkụ na desktọọpụ dị larịị, gbanwee maka ojiji ị ga-enye ya, ọ bụghị ego nke ahịhịa na-abaghị uru. na KDE nwere ma na ị ga-elo ya ma ị na-eji ya ma ọ bụ na ị naghị eji.
Zaghachi onye na-akwado Ekwensu
Ee, mana ebe ọ bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ọ bụla na onye ọ bụla na - eme ya na mgbe ha chọrọ, ụzọ KDE ka mma karịa n’ihi na mgbe ihe niile dị n’usoro ya, mgbe ha wepụrụ ya ị ga - ahụ na ha nwalere ihe niile ma ọ bụ ọtụtụ. Mgbe ha na Gnome, mgbe ha wepụtara ya na beta iji chọta ahụhụ, ebe ndị nnwale ahụ anaghị eji ọtụtụ ndọtị ma anaghị ahụ ya nke ọma na menu, a hapụrụ ha na-arụghị ọrụ na ụdị ọhụụ ahụ.
Ndewo John. Kpọmkwem, sistemụ nke na-etinye ndọtị a bụ ọdachi, mana nke ahụ apụtaghị na ụdị echiche a, ịgbatị desktọọpụ yana ndọtị adịghị mma.
Ọ dị m mma karịa otu KDE, nke jikọtara ọnụ ma ị jiri ya ma ọ bụ na ị naghị eji ya. M na-enye otu ihe atụ ... Baloo, ọtụtụ ndị achọghị iji ya n'ihi na ọ na-eri ọtụtụ ihe onwunwe ma ọ bụ n'ihi na ha chere na ọ na-emebi nzuzo ha.
Ọ gaghị aka mma ịnwe nhọrọ iji wụnye ma ọ bụ wepu ya na otu ịpị, dị ka ndọtị?
Echeghị m na nsogbu na ndọtị ahụ metụtara na ọ bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, echere m na ọ bụ maka atụmatụ adịghị mma ma ọ bụ enweghị ike ịga ya nke ọma.
Tupu ịhapụ ụdị ọhụrụ, ọ bụ Gnome bụ onye kwesịrị imeghari ihe ndọtị ochie ka ha wee rụọ ọrụ nke ọma, maka ihe ha nọ na peeji gọọmentị, echere m na ọ bụrụ na ha emeghị ọ bụ maka enweghị akụrụngwa.
Ihe m chọrọ igosipụta na nkọwa ahụ bụ na KDE na Gnome bụ echiche desktọọpụ dị iche iche, yabụ ọ dị m ka ntụnyere ahụ abụghị ebe.
Ọ dị ka ịtụle lxde na kde, ha bụ echiche abụọ na-emegide mmụọ na-achọ ebumnuche dị iche iche. Ahụghị m isi na ịsị, kde nwere arụmọrụ a na gnome adịghị, nke ọma, ee, ọ naghị, yabụ gịnị? bụ na nke ahụ baara gị uru anaghị m eji ya ma ọlị, ya mere ...
Baloo nwere ike ịkwụsị ya site na pịa nke CheckButton 😉
Ọ bụ eziokwu, KDE na ihe niile na ohere diski .. dị ka ugbu a draịva siri ike na-abịa nke ọma!
Mgbakwunye Gnome bụ ọgba aghara, n'ihi na ebe ọ bụ na ị dabere na nke na-adịghị emelite site na otu nsụgharị gaa na nke ọzọ, ị ga-echere ma ọ bụ gbanye uwe gị ma mụta otu esi eme ka ọ rụọ ọrụ ...
Ndewo Fistro, ọ bụghị ajụjụ banyere oghere ị nwere na diski, ọ bụ ajụjụ nke ijide ya na ihe ị na-eji ma ọ bụ na ịchọrọ iji. Dịka ọmụmaatụ, na ohere ahụ kde nhọrọ nke m na-agaghị eji mee ihe ọ bụla, ọ masịrị m ịnwe trilogy nke starwars, onye nwe mgbanaka, hobbit na matriks dịka ọmụmaatụ. Ka i si hụ, ọ bụ ihe masịrị gị ihe ọ bụla ọzọ.
Banyere ndọtị, ekwenyere m kpamkpam na gị.
Mbụ m na-ekele gị na isiokwu ahụ, ihe niile metụtara Gnome na-atọ m ụtọ. Enwere m Ubuntu Gnome 14.04 ugbu a na gburugburu Gnome 3.10.4. Ajuju m bu ma oburu na m melite nsụgharị Gnome, enwere m ike nkwụsi ike ma ọ bụ nnabata nke igodo ọrụ nke akwụkwọ ndetu m ...
Anọ m na GNOME maka ndụ….
Ọ dị mma maka gị 😉 http://goo.gl/2DwEhQ
O doro anya na isiokwu plasma mara mma nke nseta ihuenyo gị. Nwere ike ịgwa m aha ahụ? Ekele 😀
Ọ bụ AIR, mana akara ngosi tray sitere na isiokwu Plasma akpọrọ KDE5.
Nke mbụ: http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/07/24/150724092649508569.png
nke abụọ nke onye ọrụ Plasma (kde) na-ekwu maka GNOME ọ dị ka a ga - asị na ị debere ịkpa ókè agbụrụ n'ihu onye isi ojii ...,
nke ato: Ana m ele GNOME anya dị ka Firefox dị ka ihe nchọgharị zuru oke nke ị na - agbakwunye ndọtị iji meziwanye ojiji ya ma mee ka ọ bụrụ nke onwe, dịka GNOME ma ọ bụ ị nwere ike iche n'echiche Firefox nke gụnyere ndọtị niile dịka Plasma )? , M na-aga maka nke mbụ nhọrọ ..
nke anọ: usoro nke oge ụfọdụ na-erepịakwa gị 1g ebule na ụdị ọ kachasị na-adịbeghị anya jupụtara na ahụhụ, echeghị m na a ga-akpọ ya kacha mma ...
Amaghị m ihe okwu a bụ, agbanyeghị m na-aza:
Nke mbu: http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/07/24/15072411000468730.png
Nke abụọ: Site na GNOME ma ọ bụ gburugburu desktọọpụ, anaghị m ele mmadụ anya n'ihu. Amaara m otú m ga-esi amata ezi ihe na ihe ọjọọ n’ime nke ọ bụla.
Nke ato: Ihe yiri nkea anaghị emetụta na nke a, n'ihi na ọ bụghị na Firefox nwere ọtụtụ ndọtị arụnyere, ọ bụ na enwere ike ịhazi Firefox ruo n'ókè nke itinye ntinye URL na ala, bọtịnụ igodo gaa na n'aka nri, taabụ ndị dị n'aka ekpe, maka mgbakwunye a na-agaghị eji ya, mana ọ ga-abụ ihe dị na ngwa ahụ.
Nke ano: Echere m na ị na-eche KDE 5. Ọfọn, ugbu a enwere m GNOME Shell arụnyere na kọmpụta ọrụ m (yana 8GB nke RAM), na KDE 4 na Laptọọpụ m (yana 6GB nke RAM), yana arụmọrụ nke KDE ọ ka nnọọ mma, dị ka oriri otu ngwa mepere, sịnụ: Chromium, Keepassx, Dolphin / Nautilus, Synergy, Konsole / Gnome Terminal ..
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na KDE 5 ka nwere nsogbu ya, ọ bụ mmepe ọhụụ ọhụụ, mana GNOME enweghị ha?
Agbanyeghị, a arụmụka na-enweghị atụ ihe ị na-achọ ibido.
Ekele na ekele maka ịza ajụjụ.
1 - Mgbe onye ọrụ KDE sị na Gnome achọghị ya, ọ dịka ọkụkọ na-ewe iwe ma na-abara ọbọgwụ mba maka ịghara ịbụ ụtụtụ.
2 - Ọ na-adị m ka ọ bụ ihe iju anya mgbe m gụrụ akwụkwọ ndị a nke ha na-ekwu na Gnome anaghị arụ ọrụ na-enweghị ndọtị na m na-ahụ na m na-eji ya na-enweghị ndọtị na ọ fọrọ nke nta na-enweghị isiokwu. XD
Zaghachi to didaz
Ekwenyere m na nke ahụ. Ndị mmadụ amaghị etu desktọọpụ si arụ ọrụ, na ịsị na gburugburu dị ka GNOME anaghị arụ ọrụ na-enweghị ndọtị, anaghị arụpụta, wdg ..., bụ otu ihe na amaghị ihe na amaghị ihe, yana nkwanye ugwu niile. Enwere ọtụtụ, ọtụtụ n'ime anyị na-eji GNOME 3 na-enweghị ndọtị. Enwere m ya na-enweghị ndọtị, n'ihi na dịka ọ na-abịakwute m na Fedora bụ ịwụnye ma rụọ ọrụ, ịwụnye ngwa ọ bụla m chọrọ, codecs na nkwụsị zuru ezu. Achọghị m ịhazi ihe ọ bụla, agbanwere m ndabere na nkwụsị zuru ezu. Abụ m onye ọrụ sistemụ, mana m na-arụ ọrụ na akwụkwọ, akwụkwọ, omume ọma na njikwa, ọ bụ ihe m na-ejikarị, ọ naghị emetụta trauma, m na ha niile na-arụ ọrụ nke ọma. Kwagide site na Gnome 2 gaa Gnome 3 bụụrụ m nsogbu nye ọtụtụ, gụnyere m. Echetara m na m gbalịrị inye ya ọtụtụ ohere na mbido, laa azụ na 2011, mana ọ bụ eziokwu na nkà ihe ọmụma o wetaara m emeghị ka m kwenye. Ọ bụ ya mere m ji laghachi KDE (nke m na-eji kemgbe 2010) mana enwere ihe na-adịghị m mma. Amaara m uru ya, ike nke ngwa ya, mana ọ dị m ka (n'ezie, dị ka ụfọdụ na-ekwu gburugburu ebe a) na nsogbu KDE bụ kpọmkwem ihe dị iche na ya, nhazi ya na ike nhazi. Ha na - eme ka ọ bụrụ ntakịrị usoro na - esighi ike, nke na - esighi ike karịa GNOME. Banyere oriri nchekwa, site na imeghe Konqueror, KDE na-erepịa 1,2 GB. Na Gnome na Firefox ọkara. Mgbe ahụ ị na-ahazi KDE dị ka ịchọrọ nwa oge, mana ọ bụ eziokwu, na mgbe ụfọdụ ọ na-adị ka ụfọdụ ịhazi ya "echezọ" ya ozugbo ị gbanyechara igwe ahụ. Ma n'ezie na ọ nweghị ihe ọ bụla ga-eme megide njikọta zuru oke nke netwọkụ mmekọrịta na / ma ọ bụ akaụntụ na desktọọpụ dị ka nke GNOME nwere. Nke a bụ nnukwu nzọụkwụ nke desktọọpụ ikpeazụ a, nke ekwuru obere ihe banyere ya: njikọta zuru oke nke desktọọpụ na netwọkụ nke Gnome nwere, na na obere sekọnd na-eme ka sistemụ jikwaa yana mekọrịta akwụkwọ, foto, nchekwa, ozi ịntanetị, ọkacha mmasị. , kọntaktị na kalenda na ọrụ. Ọ dị ịtụnanya. N'ikpeazụ, mgbe m laghachiri na GNOME ma chọpụta uru ọ bara, mgbanwe ya ezi uche dị na ya karịa ndị ahụ bịara na mmalite nke ngalaba ya, yana ọdịdị ya dị ka nke a, anọnyere m ya. Otu onye matara na achoghi m mkparita uka, dọkụmentị, belata ma ọ bụ bulie, ihe niile na - ejikọ ma zuru oke ma na nkeji, amatakwara m nhazi ole m chebere na gburugburu a. Ekwuru m ya ugbu a, ha dị iche iche desktọọpụ, ma echere m na n'ihe gbasara akụ, ugbu a, Gnome ka mma, ekwenyere m na ọ siri ike ma nwekwuo ike, yana n'ezie mwekota ọ na-enye na mail, kalenda, akaụntụ n'ịntanetị, sitere mgbe ahụ ihe kachasị mma m hụtụrụla.
Achọpụtara m na ọ dị mma na ndị mmadụ na-eji nke a ma ọ bụ desk ọzọ ma ọ bụ dị ka a ga - asị na ha achọghị iji ma. Ọ bụrụ na mmadụ ejiri ya, ọ ga-abụ n'ihi na ha masịrị ya, echeghị m na ndị mmadụ na-eche ihu ruo n'ókè nke iji ihe ha kpọrọ asị kwa ụbọchị. Nke ahụ kwuru, ugbu a, m na-akwado echiche m na ị nwere ike ịsị, kama inwe mmetụta nke m nwere mgbe m na-eji Gnome: Gnome na-eme m ụjọ, Gnome na-eme ka nchegbu. Na ihe niile n'ihi ụzọ o si eji windo na ogwe aka. Eleghị anya ọ bụ nsogbu akwara nke onwe m nwere, mana naanị ilele nseta ihuenyo nke Gnome na-enye m ọgazị bump na mkpagide na-agbago na ala azụ m.
Ee, ọ bụ n'ezie nsogbu nke gị. Jisie na nyocha.
infum! Desktọọpụ na-amasị m
Ọ bụ eziokwu na ha gbanwere ụzọ e si eji ya eme ihe, na onye nwara ya na-ada (na ike) na nke ahụ. Ma ozugbo i jiri ya ruo oge, ị ga-amalite inwe mmasị na ya.
Okwu banyere enweghi ogwe ọrụ ka ihe atụ. N'ụlọ m enwere Gnome Shell na windos7 na-arụ ọrụ, ị gaghị eche n'echiche ugboro ole m hụrụ onwe m na-ewere òké ngwa ngwa n'akụkụ nkuku iji gbanwee ngwa ma ọ bụ mepee ihe, ma na-elegharị anya na ihuenyo ahụ gbagwojuru anya mgbe m na-azaghị azịza. Ọ na-ada ka ihe ịtụnanya, mana mgbe ọ mara gị ahụ, ọ na-adị ngwa karịa ịchọta ihe n'ụzọ ahụ. Ọ dịka ịlele ụlọ ọrụ xD
Na mkpokọta, ihe ndị ị tụrụ aka bụ ihe uto, mana ihe m ga-ekwenye na ya bụ isiokwu Nautilus-Dolphin. Nautilus enweghị ihe ọ bụla ọ ga-eme ebe ahụ, Dolphin na-etipịa ya.
Otu ihe ahụ na-eme m. Don'tghọtaghi otu GNOME dị ngwa na kensinammuo ruo mgbe ị ga - emeso "usoro" ma ọ bụ gburugburu ọzọ. Na-arụkọ ọrụ na W7s, ahụrụ m onwe m ọtụtụ oge ka m na-eburu pointe aka na aka ekpe aka ekpe, na-enwe olileanya na m ga-ahụ ihe m ka mepere, mana mba, ekwesịrị m ịchọ ma jikọtara ya na ogwe ọrụ ahụ.
Kedu ka oriri ebule si aga? oge ikpeazụ m jiri gnome na-elo 1GB na enweghị ngwa na-agba ọsọ.
gnome-shei, n'ozuzu m, na-erepịakwa n'etiti 70MB ruo 180MB, yana iji ihe karịrị otu izu. Nke a, n'ezie, na PC nwere ọtụtụ GB nke RAM. Enyochawo m ya na ndị ọzọ nwere oke ole ma oriri ya amachibido karịa (n'etiti 50MB), na ule ọsọ ọsọ.
Ihe kachasị RAM na-ewe na PC oge niile bụ ihe nchọgharị weebụ. Ahụla m ka Chrome were ihe dịka 3GB iji ya. Ikekwe enwere ngwa na-ebupụta na njikọ na desktọọpụ ma na-ewere ọtụtụ ihe nchekwa ahụ.
Gụ ụfọdụ nkọwa m nwere mmetụta na ụfọdụ ndị anwalebeghị Gnome Shell ihe karịrị ọkara otu awa. Ọ bụ mgbanwe nke mberede na ihe mbụ nke ga-abụ ịmụ ka esi eji ya, na emesịa ịchọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ bụ akụkọ ọzọ.
Ahụwo m na e nwere ndị na-eche na ọ bụrụ na ọ dị nwayọ nwayọ ma ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ na ọtụtụ akwụkwọ mepere emepe. Nke a abụghị eziokwu, ikekwe ha achọpụtabeghị otu esi eme ya na Gnome Shell, enwere m ike ịkwado gị na ihe niile dị nso n'ụzọ mkpirisi na ịpị aka abụọ ma ọ bụ abụọ kachasị (M na-arụ ọrụ na 6 ma ọ bụ 7 na-emeghe ọnụ, 6 ma ọ bụ karịa PDFs, ihe nchọgharị, onye ahịa ozi na akwụkwọ ederede dị iche iche). Mụ onwe m na-eji oghere ọrụ dị egwu iji hazie site na ụdị mmemme ma ana m eji igodo SUPER (Windows na ọtụtụ keyboards) ịnyagharịa n'etiti ha, họrọ windo ma ọ bụ mepee mmemme / faịlụ ọhụrụ.
Isi ihe dị iche m na-ahụ n’etiti KDE na Gnome Shell n’ihe banyere imewe ihe ọmụma bụ na nke mbụ nwere ngwa ọrụ niile dịnụ ma ị nwere ike iwepu ha ma ọ bụ ghara iji ha na nke abụọ ị nwere isi iji rụọ ọrụ ma ị nwere ike itinye ngwaọrụ ọhụrụ ka ha bụrụ. dị mkpa.
Ngwanu, abum onye mmebe ihe na achoghi m Gnome ... nyem eze nke idi nfe ka xfce.
Enwere nkọwa dị na nhazi na ntinye nke bọtịnụ ndị na-eme ka m si ebe ahụ gba ọsọ, ma eleghị anya, m na-ejikwa ya Xubuntu XD
Ọtụtụ gburugburu desktọọpụ na mụ ebe a iji Canonical's Unity 😐
Zaghachi Faustino Aguilar
Otu okwu m na-agụ ebe niile bụ na Gnome na-adabere maka mbadamba ma ọ bụghị maka desktọọpụ ... N'ezie, ọ bụghị eziokwu 100%. Na Gnome ha na-eche maka desktọọpụ na-eji ikike mmetụ aka (nke na-ewu ewu na-ewu ewu), agbanyeghị na m ghọtara na nke a abụghị 100% mana (Mbugharị na Wayland na-efu). Ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ zuru oke maka laptọọpụ ma ọ bụ desktọọpụ na iji keyboard. N'ime desktọọpụ niile m ji rụọ ọrụ, Gnome bụ "keyboard enyi" kachasị, nke ọ dị mfe ịmeghe ngwa (aha ngwa Super + + abanye), gbanwee n'etiti aps, gbanwee desktọọpụ, zaghachi ozi ngwa ngwa, wdg. Nke ahụ bụ nnukwu uru na ole na ole na-ekwu
Kemgbe a mụrụ ……
Zaghachi ka edgar hdz
Ndewo, ihe m na-eji eme ihe mgbe niile, adịkwaghị na GNOME 3.16.
Ihe dị mfe dịka inwe ike "njikọ folda ma ọ bụ faịlụ" site na FILES !!!
Mgbe m nwere m partitions:
/ data (ebe m na-ahapụ foto m niile, vidiyo, wdg)
Ya mere, ana m eke njikọ folda mgbe niile n'ụlọ m na / data / Documents (dịka ọmụmaatụ).
Nke ahụ bụ isi nhọrọ!
Iji dozie nke ahụ na-efu, m ga-abanye Linux ọzọ (Debian) gaa n'ụlọ m Debian ma "detuo" njikọ ndị e meburu na mbụ, n'ụzọ ahụ ọ na-arụ ọrụ.
Nhọrọ nke imepụta njikọ ga-adị, naanị ị ga-adọkpụrụ folda ma ọ bụ faịlụ ahụ na bọtịnụ etiti wee dobe ha ebe ịchọrọ njikọ (s) (enwere ike ịme ya na ọtụtụ faịlụ na folda ọnụ)
ps: mgbe ihe enweghi ike ime site na eserese eserese enwere uzo ozo nke ime ya site na njedebe, n'okwu a na:
n'ụzọ dị otú a ihe niile dị na Documents folda gị ga-echekwa na nkebi data.
Iji kpughee eriri USB na-enweghị imeghe nautilus (faịlụ) anyị na-akpali pointer pointer na ala nke ihuenyo (ebe ọ bụla n'okpuru) maka nke abụọ na ngosi ngosi ahụ ga-egosipụta, anyị na-ahọrọ eriri USB ma pịa bọtịnụ dismount na ọ bụ ya
N'uche m, ha na-emezigharị ihe amamịghe ha metụtara. Ahụrụ m ya n'anya n'ihi na ọ bụghị naanị n'oge a ma ọ bụ nke ejiji. Minimistic ihu dị mma ma nwekwara ike ịpụta obere ibu na nhazi.
Could nwere ike ịkọwa omume ọma gị na Gnome na okwu abụọ: obere na uru.
Uru ya dabere na ndọtị ịchọrọ ịgbakwunye.
Anaghị m arịọ ihe karịrị ihe gburugburu ebe a na-enye. Ọ bụrụ na m bụ onye na-akwado ihe eserese eserese ma ọ bụ nhazi dị elu, Gnome agaghị abụ ebe kachasị amasị m.
Ọtụtụ depụtaghachi echiche gaa na gnome shell
EasyEDA PCB imewe na naanị nkeji